ဆီးရီးယားအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးစွက်ဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကြပါစို့(သုံးသပ်ချက်-ဘာသာပြန်) - News @ M-Media
ဆီးရီးယားအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးစွက်ဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကြပါစို့(သုံးသပ်ချက်-ဘာသာပြန်)
in Analysis — September 11, 2013
စက်တင်ဘာ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃
သာကီ ထက်ကောင်း ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
၀ါရှင်တန်မှာ စစ်ရေးအချက်ပေးသံတွေ ညံလာပြန်ပြီတစ်ခါ။ ဓာတုလက်နက်တွေအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ ဆီးရီးယား သမ္မတ ဘရှားရ် အလ် အဆဒ်ကို မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ စစ်ဆင်ဖို့ သမ္မတ ဘားရက်ခ်အိုဘားမားက ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်အကြောင်း အနည်းငယ် ကြားညှပ်ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်ဟာ ဓာတုလက်နက်အသုံးချမှုဖြစ်စေ သမရိုးကျလက်နက်အသုံးချမှုဖြစ်စေ ဆန့်ကျင်သူပါ။ နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအပေါင်းကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးချက်နဲ့ အဖြေရှာခြင်းကို ထောက်ခံသူသာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်လက်နက်အမျိုးအစားကိုမဆို အသုံးချစစ်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှ သက်ဆိုင်ရာပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတာဟာ လူသားတွေအတွက် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်(လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်)။ ဆီးရီးယားအပေါ် စစ်ရေးအရ ၀င်စွက်ဖက်ဖို့ အမေရိကရဲ့ဟန်ပြင်နေခြင်းအပေါ် ကျွန်တော် ဘာကြောင့်ဆန့်ကျင်ရသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို နားလည်စေချင်လို့ ဒီအချက်ကို အရင်ကြားညှပ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးရီးယားအစိုးရက မိမိပြည်သူတွေအပေါ် ဓာတုလက်နက်တွေ အသုံးပြုနှိမ်နင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီး စစ်ဆင်တာဟာ လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတုလက်နက်တွေထုတ်လုပ်ပြီး ဆီးရီးယားကို ရောင်းချပေးခဲ့တာက မဟာပါဝါ နိုင်ငံကြီးတွေသာ ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့ “ရက်အကန့်အသတ်စစ်ပွဲ” အဖြစ် တကယ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလျှင်ပင် အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးကျူးကျော်မှုမှာ ဖြစ်နိုင်ချေကိစ္စတွေ တော်တော်များများ ရှိနေပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီဆိုယင် ဘရှားရ် အလ် အဆဒ်က ဗုံခိုကျင်းထဲဝင်ရောက်ပြီး စစ်ရေးကို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးကြောင့် သူ့ဗုံးခိုကျင်း အဟောသိကံ ဖြစ်ပြီဆိုယင် သူက အီရန်ဖက် ပြေးပါလိမ့်မယ်။ အီရန်အစိုးရက သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးပြီး စစ်မက်ကို ဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေပါလိမ့်မယ်။ သူ အသက်ရှင်နေသရွေ့ စစ်ပွဲက ပြီးဆုံးမယ့် လက္ခဏာ မရှိပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်အင်မျိုး အမှန်ဖြစ်လာခဲ့ယင် ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကိုချည့်နဲ့စေဖို့ နဲ့ ဓာတုလက်နက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး “ကန့်သတ်ရက် ၆၀ လေကြောင်းတိုက်ပွဲ ” ဟာ လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပေဘူး။ ဘားရက်ခ် အိုဘားမားအနေနဲ့လည်း စစ်မီးမွှေးသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရကိန်း ရှိနေတယ်။
ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကိုနှိမ်နှင်းမယ့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပုန်ကန်သူ ဆီးရီးယားတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာ ပိုပြီးအားကောင်းသွေးကြွလာဖို့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်ယင် လက်ဘနွန်နဲ့အီရတ်မှာရှိတဲ့ အီရန်ရဲ့အထောက်ပံ့ခံ ရှီအဟ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတို့က ဆီးရီးယားစစ်တပ်ကိုကူညီဖို့ ၀င်ရောက်လာကြမှာဘဲ။ ဒီတော့ စစ်ပွဲရဲ့လမ်းကြောင်းချော်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်။
တကယ်လို့ အမေရိကန်လေကြောင်းစစ်ပွဲက ဘရှားရ် အလ် အဆဒ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ပြီး ပုန်ကန်သူတွေ အနိုင်ရခဲ့ယင် အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေက “ ငါတို့ကိုဆန့်ကျင်မဲ့အစိုးရဖွဲ့လိမ့်မယ် ” လို့ တွက်ဆကြပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်အားပေးရပ်တည်တဲ့ ဆီးရီးယားအစိုးရအဖို့ အီရန်က မုလ္လာဟ်တွေကို ကြောက်လန့်နေရတော့မှာ အမှန်ဘဲ။
ဒီလိုဆိုယင်ဖြင့် အမေရိကန်ပံ့ပိုးတဲ့ ဆီးရီးယားပုန်ကန်သူအုပ်စု နဲ့ အီရန်ပံ့ပိုးတဲ့အုပ်စုတွေအကြား တိုက်ပွဲငယ်တွေ ဆက်ဖြစ်ပြီး အတောမသတ်တဲ့စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်လာဖို့များပါတယ်။ အမေရိကန်အားပြုဆီးရီးယားပုန်ကန်သူတွေအပေါ် သွားပြီးတိုက်ကြဖို့ အီရတ်မှာရှိတဲ့ ရှီအဟ်အုပ်စု နဲ့ လက်ဘနွန်နိုင်ငံက ရှီအဟ်တိုက်ခိုက်ရေးသမား(ဟစ်ဇ်ဘိုလာ)တွေကို အီရန်က တွန်းပို့မှာအမှန်ဘဲ။
ဒီအနေအထားရောက်ပြီဆိုမှတော့ ဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စစ်ပွဲအဆင့်ထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တခြား အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ရှီအဟ်တွေကို ငွေကြေးထောက်ပံ့လို့ ဆီးရီးယားထဲ ၀င်ရောက်စေမယ်။ ဘရှားရ် အလ် အဆဒ် ရဲ့စစ်တပ်အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းစေမယ်။ အဲ့ဒီအကြွင်းအကျန်တပ်တွေကလည်း အီရန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ဖေးမမှုအားဖြင့် အီရန်နယ်စပ်ကနေတဆင့် လက်နက်ခဲ့ယမ်းတွေ လွတ်လပ်စွာ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်နေလိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ တူရကီ၊ ကာတာ စတဲ့နိုင်ငံတွေက သူတို့ရဲ့ ရေနံဝင်ငွေတွေသုံးပြီး အခြားနိုင်ငံက စွန္နီတွေကို ထောက်ပံ့မယ်။ ဆီးရီးယားထဲဝင်စေပြီး ရှီအဟ်တွေကို ပြန်တိုက်ခိုင်းမယ်။ ဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုယင် မြို့ရွာများစွာမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စွန္နီနဲ့ရှီအဟ်အကြား ဘာသာတူအတွင်းအပြန်အလှန် ပြဿနာရှာအကြမ်းဖက်နေကြတဲ့ ဒုတိယအီရတ်ဘ၀အဖြစ် ဆီးရီးယားက ဆိုက်ရောက်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်။
ဒီစစ်မက်ကူးစက်ခြင်းသီအိုရီက အိမ်နီးချင်း လက်ဘနွန်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်သွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီက စွန္နီနဲ့ရှီအဟ် စစ်သွေးကြွများအနေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။ လက်ဘနွန်ဗဟိုတပ်မတော်အနေနဲ့လည်း ဒီစစ်အုပ်စုတွေအပေါ် ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတော့မယ် မထင်ဘူး။
ဆီးရီးယားစစ်မီးက ဒေသတစ်ခုလုံးတောက်လောင်သွားမယ်ဆိုပါစို့။ အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးကို ပါလက်စတိုင်းတွေက ခြိမ်းခြောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အစ္စရေးနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်တည်ရှိနေမှုကို သူတို့က ဘယ်တုန်းကမှ လက်မခံနိုင်ကြသူတွေလေ။ ဒီတော့ သူတို့ဟာ ဆီးရီးယားစစ်မီးကူးစက်မှုကို အသုံးချပြီး အစ္စရေးကို ဆွဲသွင်းလို့ စစ်ရေး အားပြိုင်လာကြပါလိမ့်မယ်။
စစ်ရေးစစ်ရာကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ အမေရိကန်ဒေါ်လာကြီးစိုးမင်းမူနေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဟာလည်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ထိခိုက်နစ်နာသွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဆိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီလိုပါ။
သမ္မတ ဂျော့ဂ်ျဘုရှ် ဂျူနီယာက အီရတ်ကို ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည်စောင်းငဲ့ကြည့်သင့်တယ်။ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပျက်စီးစေမယ့်လက်နက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို အရေးယူဖို့ ဘုရ်ှက အီရတ်ကို စစ်ဆင်ခဲ့တာလေ။
ဂျော့ဂ်ျဘုရ်ှမှာ တခြား ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိနေခဲ့တယ်။ အီရတ်မှာရှိတဲ့ ဒုတိယမြောက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေနံသိုက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပါဘဲ။ ဒါမှ ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းကို ဆွဲချနိုင်မယ် မဟုတ်လား။ အဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်ဆင်မှုဟာ အများဆုံး ခြောက်လဘဲ အချိန်ကြာညောင်းမယ်လို့ သူက တွက်ချက်ခဲ့တယ်။ ခြောက်လအတွင်း သူ့ရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ရမယ်လို့ပေါ့။
ဒါပေမယ့်လည်း စစ်ပွဲက ၆ လမက သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ရည်မှန်းချက်လည်း မပေါက်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ အဆုံးသတ်မှာ အခွန်ထမ်းအမေရိကန်တွေ၊ အခြားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကုဋေပေါင်းများစွာ ဒေါ်လာငွေတွေဟာ ပြန်အမ်းပေးမှာမဟုတ်သော လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူတပ်ဆင်ရေးမှာ အသုံးပြုခံခဲ့ရတယ်။ ဘုရ်ှရဲ့ အီရတ်စစ်ပွဲဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှု၊ ငွေကြေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ပါဘဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ အီရတ်ကျူးကျော်စစ်ပွဲအတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဒီနေ့ထက်ထိ ပေးဆပ်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘားရက်ခ်အိုဘားမားရဲ့ “ဆီးရီးယားအပေါ် ရက်တိုကန့်သတ်စစ်ပွဲ” ထဲမှာ ဒီအချက်က ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ စစ်ပွဲမှန်သမျှ ငွေကို သုံးရတာချည်းဘဲ။ ဒီငွေကို ဘယ်သူပေးမှာလဲ ? ဘုရ်ှရဲ့အီရတ်ကျူးကျော်စစ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးက ပြန်လည်နာလန်မထနိုင်သေးပါဘူး။ အခုတစ်ခါ အမေရိကန်ရဲ့စွန့်စားခန်းအသစ်တစ်ရပ်ကို ကျွန်တော်တို့ ထပ်မံ ကြုံတွေ့ရတော့မယ်။ ဒီစစ်ပွဲမှာ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတွေ စီးဝင်သွားပါဦးမယ်။
စစ်ဖြစ်တာကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိကြပေမယ့် စစ်ရဲ့အဆုံးသတ်မှု နဲ့ စစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ မသိမြင်ကြဘူး။ ယခုပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ပွဲက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ လက်ငင်းအကျိုးတရားတစ်ခုကို စဉ်းစားမိကြပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ ကဏ္ဍများရဲ့ ရံပုံငွေတွေဟာ ဆီးရီးယားကို ဒဏ်ခတ်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းပြောင်းအသုံးချခံရပါတော့မယ်။ နိုင်ငံအချင်းချင်းဖြစ်ရတဲ့ စစ်ပွဲ အတွက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဓာတုလက်နက်များအသုံးပြုမှုဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဓာတုလက်နက်တွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်များကိုတော့ ဒဏ်မခတ်ဘဲ အသုံးပြုသူတွေကို ဒဏ်ခတ်နေသတဲ့လား ?
လာလတ္တံ့သော ကပ်ဆိုးဒုက္ခတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ ? ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေက အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်ခ်အိုဘားမား နဲ့ ရုရှသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် တို့အပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဆီးရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ဂျီနီဗာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဖရင့် ကျင်းပဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးဖို့ အရေးပေါ် လိုအပ်ပါတယ်။
ဆီးရီးယားပြဿနာအပေါ် နိုင်ငံရေးအရ နည်းလမ်းရှာအဖြေထုတ်ရေးအတွက် ဒီကွန်ဖရင့်က ရည်ရွယ်ရပါလိမ့်မယ်။ စစ်ရေးဟန်ပြင်နေကြတဲ့ အင်အားစုအားလုံး ဒီကွန်ဖရင့်ထဲ ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် ဘာသာရေးစွက်ဖက်မှု ကင်းရှင်းတဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး သမ္မတ ဘရှားရ် အလ် အဆဒ်ကို အသာတကြည် အာဏာစွန့်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးရီးယားကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျတဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်ခုဖြစ်စေချင်ယင်တော့ ဒီအရာနဲ့ အစပြုရပါလိမ့်မယ်။ စစ်ပွဲနဲ့ ဘယ်တော့မှ အဖြေထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
** Lagos State University, Lagos ၏ ပြင်သစ်စာပေသင်ကြားရေးဌာနမှ Professor Fatunde ရေးသားသော Against U.S. intervention in Syria သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကို “ သာကီ ထက်ကောင်း ” မှ ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုပါသည်။
Tags: middle_east, Syria, US